Imigwaqo emithathu ehamba phambili emhlabeni iqoqa izikweletu ezingaphezu kwama- $ 60 billion
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Ukuhamba ngesikebhe » Imigwaqo emithathu ehamba phambili emhlabeni iqoqa izikweletu ezingaphezu kwama- $ 60 billion
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Ukuhamba ngesikebhe • Industry Hospitality Industry • Izindaba Zokunethezeka • Izindaba • Ukwakha kabusha • Izindawo zokuhlala • Unomthwalo wemfanelo • Ezokuvakasha • Transportation • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
Emizileni emithathu ehamba phambili emhlabeni, ukusinda kulo nyaka kwaba nomphumela omubi okuholele ekutheni kushe imali enkulu kanye nemithwalo emikhulu yezikweletu.
Umthwalo wesikweletu seNorway Cruise Lines wawungaphezu kwe- $ 12.15 billion
Ku-Carnival Corporation, isikweletu sasizungeze u- $ 30 billion
IRoyal Caribbean, isikweletu esinqwabelene besingaphezu kwe- $ 18.95 billion
Unyaka ka-2020 wawungathetheleli olayini besikebhe kodwa u-2021 ubukeka sengathi uqale ngenothi eliphakeme kancane. Kubadlali abathathu abahamba phambili embonini, ukusinda kulo nyaka kuthathe umthwalo wabo okwaholela ekushisweni kwemali ephezulu nasemithwalweni emikhulu yezikweletu.
Ngokuya ngemininingwane yocwaningo lwakamuva, imigqa emithathu ehamba ngesikebhe inqwabelene ngaphezu kwezigidi ezingama- $ 60 ezikweletini phakathi nesikhathi sobhadane. Imigodi YeNorway Cruiseumthwalo wesikweletu wawungaphezu kwe- $ 12.15 billion. Ngoba I-Carnival Corporation, kwakucishe kube ngama- $ 30 billion ngenkathi iRoyal Caribbean, yayingaphezu kwe- $ 18.95 billion.
IDeutsche Bank iphakamise inani lentengo yayo I-Royal Caribbean isitoko kusuka ku- $ 62 kuya ku- $ 79. Ngakolunye uhlangothi, uJP Morgan wasuka ku- $ 91 waya ku- $ 100. Ngenxa yalombono omuhle, inani lamasheya enkampani yokuhamba ngomkhumbi lakhuphuka.
Ngokuya ngemininingwane yomkhakha, intengo yamasheya eRoyal Caribbean kusukela ngoMashi 24, 2021 ibingu- $ 82.45, inyuke ngo-92.36% esikhathini esingunyaka owodwa. Ngokuqhathaniswa, ngo-2020, intengo yesabelo sayo yehle ngo-44%.
Ngokufanayo, iCarnival Corporation neNorway Cruise Lines zisezingeni eliphezulu kusukela kuqale u-2021. Ukuhweba ngo- $ 25.79, iCarnival inyuke ngama-59.8% esikhathini sonyaka owodwa, kuyilapho iNorway inyuke ngo-61.1% ngentengo yokwabelana engu- $ 25.40.
Ku-Q4 2020, iRoyal Caribbean ithumele ukulahleka kwemali engamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-1.37, yathumela ukulahleka kwayo minyaka yonke ku- $ 5.8 billion. Imali engenayo yalesi sikhathi ifike ku- $ 34.1 million, ukukhala okude kakhulu kunesibalo sayo se-Q4 2019 se- $ 2.52 billion. Ngonyaka ophelele we-2020, imali engenayo yayo ifinyelele ku- $ 2.2 billion.
ICarnival Corporation ithumele ukulahleka kwe- $ 2.2 billion nge-Q4 yayo yezimali ephele ngoNovemba 2020.
Abahlaziyi, nokho, bazwakalise ithemba, bekhombisa ukukhuphuka ngo-13.6% wemali yezimali kaCarnival ngonyaka wezi-2021. Ngonyaka wezimali u-2020, ukwanda kuzoba yi-227.4% emangalisayo.
Amazwe aseMpumalanga Afrika Adopt Regional COVID-19 Tourism ...
Vula Imingcele yase-US ngokuhlolwa kokufika kwe-COVID: Umhlaba ...
Izimbadada: Ukunethezeka kwezinkanyezi ezinhlanu kuphela emhlabeni kufakiwe ...
ISt. Kitts & Nevis: Akukho Mingcele Enombolweni ye ...
Igumbi elisha le-Airbus Single-Aisle Airspace lengeza induduzo ku ...